Shina feno lozika vita amin'ny milina vita amin'ny Flat Mask vita amin'ny milina 1 + 2 mpanamboatra sy mpamatsy | Teknolojia Shouzheng
Ity tsipika ity dia mampiasa lamba tsy vita tenona mba hamoronana ny mason-tava tarehin'ny tarehy ary auto manampy ny tadim-baravarana amin'ny mason-tava amin'ny saron-tava mivantana, fitaovana mety tsara hanaovana ny saron-tarehy ara-pitsaboana. afaka manolotra anao milina saron-tava izahay amin'ny fanaovana endrika sy endrika endrika saron-tava.
1. Ny cylinder avo lenta, ny motera servo, ny fahamarinan-toerana tsara, ny tsy fahombiazan'ny tsy fahombiazana ary ny famokarana avo.
2. Fitaovana diagnostika sy fitaovana fanairana, mampihena ny vidin'ny fikolokoloana, hiantoka ny fahombiazan'ny sy mahomby.
3. Ny fanatanjahantena avo lenta, fanaraha-maso mandeha ho azy ny fizotran'ny fitaovana rehetra, dia ny fampandehanana maharitra sy malefaka, ny fitohizan'ny asa maharitra ary ny fitoniana tsara dia mahavariana.
4. Mamolavola fakana efijery, fandidiana tsotra mora mianatra, ary mahatahotra ny vidin'ny asa.
5. Ny milina vatana iray dia manamboatra milina fanamafisam-peo roa, mandrafitra saron-tava 2 isaky ny mandeha, fahombiazana famokarana ambony.
6. Ity tsipika iray manontolo ity dia afaka mametraka amin'ny famokarana ao anatin'ny 1 andro rehefa voaomana tsara ny tranokala eo an-toerana.
7. Enti-milamina tsara ny vokatra, tsy misy vokatra fako rehefa manomboka ny milina, ny feo malefaka rehefa mandeha milina.
Anarana: milina vita amin'ny masinina 1 + 2
Hery miasa: 220V, AC ± 5%, 50HZ
Herin-jiro feno rehetra: manodidina ny 8,8KW
Rivotra voaforona: 0.5 ~ 0.8MPa, aorian'ny fanalefahana sy filtrana voalohany, ny 4000 / Min dia mihodina ny tahan'ny fikorianany
Hafanana: 0 ~ 40 ℃
Fanetren-tena: 5 ~ 38% HR
Tsy misy entona mandrehitra, entona marefo
Tsy vovoka ny atrikasa (tsy latsaky ny 100 degre)
Famokarana: 90 ~ 110 sombiny / minitra
Fitaovana fitaovana: L * W * H = 6800mm * 4800mm * 1990mm
Singa an'ny pnematic: SMC na AIRTAC, sns.
Izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny alàlan'ny fanamboarana automatique fanariana fandidiana, fandidiana ary vovoka sns.
Masina Manamboatra milina Fampidirana:
Ity ao amin'ny masinina vita amin'ny mason-tsolika mazoto dia ampiasaina indrindra amin'ny fanamboarana tampon-java-saron-tava tsy misy fika. Ny rafitra servo sy ny fanaraha-maso tsy tapaka ny mari-pahaizana ampiasaina dia fehezin'ny programa PLC mba hahatonga ny fitaovana avy amin'ny famoronana → mamorona → lasitra → manapoka → fantsom-baravarana sofina vita amin'ny fotoana iray, ary feno ny fizotran'ny famokarana. Ny mampiavaka ny mombamomba ny masera Ny milina fanamboarana mason dia fomba fanamboarana mason-tava miaraka amin'ny fampandrenesana filtration tsy tapaka amin'ny alàlan'ireo dingana toy ny fanamboarana tampon-kotrokely hafanana, fanodinana ultrasonic, fanesorana ny tapa-baravarana, ary ny fanantonana ny fehin-tsoroka hidin'ny orona.
Nahoana isika no misafidy ny milina?
Mahomby amin'ny fitehirizana ny saram-bidy amin'ny fametahana endrika milina famokarana marika makà endrika
1. Fiarovana ambony sy tsy fahombiazan'ny tsy fahombiazana, fametrahana mora.
2. ekipa mpivarotra matihanina, mihoatra ny 8 taona ny traikefa ara-barotra vahiny.
3. 24 ora an-tserasera hanampy anao hamaha ny fanontaniana rehetra.
4.Ny hafaingan'ny famokarana saron-tava dia 110-120 sela / ambony ary ambonin'ilay avo, ary ny tahan'ny pass dia mihoatra ny 98%, izay avo noho ny vokatra mitovy.
5. hafainganam-pandeha azo hainganana, kalitao maharitra, mora ampiasaina, fahombiazana famokarana ambony, takelaka 80 isan-minitra.
6. Ny firafitry ny alika aluminium, ny fanaraha-maso amin'ny efijery, ny fotoana namboarina, ny famoahana tanteraka, ny famoahana ny andro, dia nametraka ny isan'ny fanairana sy fiatoana automatique, ny hafainganam-pandehan'ny sarimihetsika nomerika.
7. Ny motera dia manamboatra motera geares telo-dingana, haingam-pandeha mihodinkodina amin'ny fikainganam-pandeha miadana be, malefaka tena ambany.
8. Ny famolavolana mask dia amin'ny alàlan'ny famandrihana ultrasonic, fampisehoana tsara kokoa, sarimihetsika haingam-pandeha.
Previous: Fitaovana vita amin'ny mason-kiraro vita amin'ny 1 + 1
Manaraka: Kn95 Mask Mamboatra Masinina
3 Milina fametahana masly Ply
Masinina Manamboatra Machine
Manjary milina fametahana endrika tarehy
Miatrika milina fanaovana maska
Kn95 Manjary Mask Mamboatra Masina
Masina Manamboatra milina
Mask Manao Machine feno feno
Semi automatique maketaka vita amin'ny masika
Mamatotra milina fanamboarana masira